Wonke umfazi ofumanisa ukuba kungekudala uza kuba nomntwana, kwaye ngubani olindele ukuzalwa kwakhe, kakhulu ufuna ukuba azalwe enempilo. Kwaye baninzi bayazi ukuba ngexesha lokukhulelwa kufuneka udle, ukugcina imithetho ethile-oku kubalulekile kwimpilo yengane eyomso, kunye nempilo kamama ngokwayo. "Nguwe odlayo," kutsho i-adage yakudala, kwaye kunzima ukuvumelani nale nto. Ngoko, imiphi imithetho yokutya kufuneka ilandelwe ngabafazi abakhulelweyo?
Okokuqala, awukwazi ukondla. Nangona intombi okanye umama ekukhumbuza ukuba ngoku kufuneka udle ngokubanzi njengoko ufuna ukuzondla wena kunye nosana, khumbula ukuba kufuneka udle ngokungangoko ufuna.
Okwesibini, umgaqo obaluleke kakhulu wesondlo kumfazi okhulelwe ngulawulo. Urhulumente oza kufuneka ugcine kuzo zonke izinto, ukutya akunjalo. Kungcono ukufumana isidlo sasemini, isidlo sasemini kunye nesidlo ngezikhathi ezimalunga nama-4-5 iiyure ngexesha elinye. Ukongezelela, kungcono ukuba ungadli isidlo sakusasa emva kokuvuka, kwaye isidlo kufuneka sibe iiyure ezintathu ngaphambi kokulala. Kwaye, ngokuqala nge-trimester yesibili yokukhulelwa, kungcono ukwandisa ngokunyuka inani lokutya ngemini (ngelixa uyanciphisa isahlulo) - i-uterus ekhulayo iqala ukufakela izitho zangaphakathi, kuquka isisu.
Ukuba akukho sisitya, musa ukuzithuthuzela. Emva kwakho konke, ngumdla wesimo esikuxelela ukuba sele ukulungele ukutya ukutya.
Amayeza omfazi okhulelweyo adinga ezimbini ukuya kweyesibini kunye nehafu yesiqingatha ngosuku. Ngexesha elifanayo, i-tea ekhululekile ivunyelwe, kwaye, ngokuchasene neenkolelo eziqhelekileyo, enye inkomfa encinci yekhofi evulekile ngosuku. Kodwa utywala ngexesha lokukhulelwa akunakwenzeka kuyo yonke into-nokuba yintlupheko. Lo mqathango wokutya oqinileyo, ongaxoxwa ngabani na.
Ayikho yoncedo yolondolozo kunye neembala. Kwaye kumzimba omdala abachaphazela kakubi, kwaye umphumo wabanye babo emntwaneni awuqondi kakuhle. Akumangalisi ukuba baninzi kubo, okuyinxalenye yemveliso kwelizwe lethu, bavinjelwe eYurophu. Ukongezelela, phantse yonke imveliso equkethe "i-chemistry" ingathatyathwa yendalo, ingabi yinto encinci. Ngoku, endaweni yokuthenga ibhotile yesiselo kunye nobunzima obunokungabaza, kuyona nto ingcono ukhethe ijusi okanye izithelo ezintsha.
Izixhobo zokusela, iziphuzo ziselo, zidla imifuno eninzi. Ngoko, omnye umgaqo wokutya okuyimfuneko ukuba uhambelane nabasetyhini abakhulelweyo - kuphela iimveliso zendalo.
Musa ukukhutshwa kunye nosawoti, okumnandi kunye okuthosiweyo. Ukugqitha okonkcenkceshe kunokukhupha umntwana weswekile, kwaye ityuwa eninzi iya kubangela ukuvuvukala.
Kwaye umyalelo wokugqibela ngokuphathelele ukutya okunomsoco, omele ukuthotyelwa ngabafazi abakhulelweyo, kuyimfuneko yokukhetha ukutya okuphawulekayo kummandla wakho. Kwiindawo ezininzi zaseRashiya azikhulisi i-citrus - kwaye ke, ngelixa kungcono ukuba ungadli. Ii-apula azikho nakwehla. Ukongezelela, akuyimfuneko ukushiya ama-oranges ngokupheleleyo, ingakumbi ukuba uyabathanda kakhulu. Kuphela kufuneka ugcine umlinganiselo, kwaye khumbula ukuba kungcono ukutya into efana nommandla wakho, kunokuba isiqhamo esingaqhelekanga.
Ngokuphathelele i-vitamin C - ngethemba lokufumana okungakumbi, oomama ngokuzayo bazame ukutya iikhilogram ezipheleleyo ze-oranges okanye i-lemons - iqulethwe ubuncinane ubuninzi kwimveli yelizwe lethu le- sauerkraut (libizwa nangokuthi "i-lemon lemon"), kunye nakwi-cranberries kunye kunye neenhlanzi ezitsha (ezo, ​​ngokwenene, kubalulekile ukuqokelela kwiindawo ezihlambulukileyo, kwaye kungekhona epaki yeedolophu kwaye kungekufutshane nomgwaqo omkhulu).
Ukuqwalasela imithetho enjalo yokulula okunomsoco ngexesha lokukhulelwa, unokuqiniseka ukuba awuyi kubangela nantlungu ingozi kumntwana, kwaye kunciphise ukuba kwenzeka, ngokusoloko exwayiswa oogqirha-ukuba bafumane ubunzima obukhulu xa bekhulelwe.
Iipilisi zokulawula ukuzala
Ngaba ulungele ukuzaliswa okulandelayo kwintsapho?
Ukuzivocavoca kwabasetyhini abakhulelweyo - i-trimester yesibini
Kaleidoscope ye-autumnal: iintlobo ezintathu zezinto zokugqoka ezivela ePandora
Ukunyamekela ngezindlela zabantu
Indlela yokuziphatha emsebenzini, ukuba uhlonishwe nguwe
U-Nikolai Baskov wabonisa iStas Kostyushkin, ividiyo
Indlela yokutya kakuhle umntwana ngomxube kwiinyanga ezi-2